Mr. Li Yangchun Prọfesọ
Gụsịrị akwụkwọ Veterinary College of Southwest University na 1981, majored na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na nkà mmụta ọgwụ, onye nkụzi nke mahadum, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ eme ya, e aku na nkuzi, nnyocha, mmepe na ire kemgbe 1982. Ọ bụ ọkachamara nke ọtụtụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ ụlọ ọrụ na nkà na ụzụ na ahịa. Ugbu a, ọ bụ n'ozuzu njikwa nke nkà mmụta ọgwụ na ngwá ngalaba.
Tang Jianhua Prọfesọ / Nduzi maka Ukpep
Gụsịrị akwụkwọ Veterinary College of Southwest University na 1985, majored na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na nkà mmụta ọgwụ, o nwere afọ 20 nke ọkachamara ahụmahụ. Ọ bụ ike nke na-edu na mmepụta nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ọgwụ ọjọọ na àgwà management dị ka ihe a chọrọ GMP.
Gruduated si Chinese Traditional ọgwụ mahadum nke Chengdu, ọgwụ, na-arụ ọrụ Sichuan Drug Administration n'etiti 1990-1994, na-aha nke International Business Engineer na 2005 site Ministry of Commerce. Ugbu a bụ isi nke Company 's International Service.
Chen Jixuan Prọfesọ / Nduzi maka Postgraduate
Gụsịrị akwụkwọ Veterinary College of Southwest University, majored na Veterinary Medicine. Ọ nọwo a nkụzi na otu collage ruo ugbu a. Na isua 25 ọkachamara ahụmahụ, ọ bụ maka management nke ahịa.
QA Manager na GMP director
Gụsịrị akwụkwọ Sichuan Okwu Mbido na Veterinary College, majored na-emepụta ọgwụ na sayensị, na 9 afọ nke ọkachamara ahụmahụ quality management nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ ọjọọ, ọ bụ ike nke na-eme ezi ikpe emeso nsogbu na àgwà management nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ ọjọọ.